5 Izandiso zeFirefox zokuphatha ukusetshenziswa kweFlash | Kusuka kuLinux
I-Flash ku-Linux iyabamba. Mhlawumbe manje kuncane kakhulu kunakuqala, kepha kusese nakho okungathandeki (kudla izinsizakusebenza eziningi kakhulu futhi akunakho ukusebenza okufana nokwenzeka kwiWindows).
Ngenhlanhla, i-HTML5 iyifaka esikhundleni sayo ngezindlela eziningi, kepha kubonakala ngathi sisenayo iFlash isikhashana. Ngaleso sizathu, sincoma ezinye izandiso zeFirefox ukukusiza ulawule ukusetshenziswa kweFlash.
2 2. I-FlashBlock
3 3.Ividiyo Yokulanda i-Helper ne-Flash Video Downloader
4 4. I-FlashResizer
5 5. I-FlashFireBug
1. Ayikho iFlash
INoFlash iyisengezo seFirefox esishintsha isidlali seYouTube neVimeo Flash emakhasini ezinkampani zangaphandle nomlingani we-HTML5.
I-Flashblock isandiso (i-plugin) yeGoogle Chrome neMozilla Firefox, esivumela ukuthi sivimbe zonke izinhlobo zokuqukethwe kweFlash.
Nge-Flashblock singavimba okuqukethwe yiFlash, noma sikwenze ngamakhasi aphelele, noma sisebenzise kuphela lezo esifuna ukuzibona noma esivumela konke okuqukethwe, kuya ngohlobo lwethu. Iphinde isivumele ukuthi sichaze uhlu olumhlophe noma uhlu oluvumelekile lapho singacacisa khona amasayithi lapho singabona khona iFlash. Isibonelo esicacile salokhu kungaba yi-YouTube, noma ngabe iningi lekhasi selivele lisebenza ku-HTML5, kunenani elikhulu lamavidiyo asasebenza ngaphansi kwalobu buchwepheshe be-Adobe. Ngakho-ke ngeFlashblock singachaza ukuthi leli khasi "njalo" lisikhombisa okuqukethwe kweFlash, ngaphandle kokuthi sikucacise njalo lapho singena kusayithi.
3. Ukulanda ividiyo & Isilandi sevidiyo ye-Flash
Amagama abo akusho konke: ingabe ufuna ukulanda amavidiyo avela ku-MySpace, i-Google Video, iDailyMotion, i-pörkölt, iFilm, i-DreamHost, i-Youtube nabanye abaningi? Ngabe ufuna ukuwaguqula ngokuzenzakalela abe amafomethi wakho wevidiyo owathandayo? Qiniseka ukuthi uzama lezi zandiso ezi-2 ezinhle kakhulu.
Uma upheqa iwebhu futhi ufuna ukushintsha usayizi wanoma iyiphi i-flash element iFlashResizer, isandiso seFirefox, ingaba wusizo olukhulu.
Ngolayini omile mpo oluhlaza ofakwa ezintweni ezikwi-flash, uzokwazi ukwenza izinguquko futhi ubuyele kusayizi owedlule ngokuchofoza kabili kulolo layini.
Kuhle ukufaka emidlalweni ye-flash, kumavidiyo we-YouTube nakwamanye amasayithi afanayo lapho sifuna ukukhulisa isidlali khona ukuze sibe nokuhlangenwe nakho okungcono.
I-FlashFirebug isandiso seFirefox esivumela abathuthukisi ukuthi balungise amafayela weFlash AS3 kuwebhu, ngendlela efanayo nokuthi balungisa iphutha lefayela le-HTML.
Ukuze usebenzise i-FlashFirebug, kufanele ufake i-Firebug ne-Flash Player okuqukethwe kwe-debugger engu-10 noma ngaphezulu (iyahambisana neziphequluli ze-Netscape).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » 5 Izandiso ze-Firefox ukuphatha ukusetshenziswa kwe-Flash
UPablo Salvador Moscoso kusho
Njengoba sisho lapha eChile, iFlash ibalulekile shit.
Bengilokhu ngisebenzisa iFlashVideoReplacer isikhashana futhi yize ekuqaleni isipiliyoni sesihambe kancane, kuyinto okufanele uyijwayele. Umshini wakho uzokubonga.
Phendula uPablo Salvador Moscoso
Umnikelo omuhle! Ngiyabonga!
Ungabuzi ukuthi kungani, kepha kwi-Debian 60 yami, ngisebenzisa i-flash-nonfree, konke kusebenza kangcono kakhulu kune-W7 Ultimate x64 SP1 eboshwe emshinini ofanayo.
I-Debian 6, uxolo. Ikati lami lijiyile 😛
Ebholeni ... konke kungaba njalo. : S
Noma kunjalo, kufanele kuqashelwe ukuthi ukusebenza kwe-flash kuthuthuke kakhulu kuzinguqulo zakamuva zeLinux ... yize kunjalo, kusaswele.
I-Hgre (ungibhalise) kusho
Yebo. Noma iku-Ubuntu 10.10 (umshini ofanayo ofanayo), kusesabekayo (i-flash-nonfree) ...
Nami ngamangazwa into kaDebian.
Phendula ku-Hgre (strawregistrarme)
Inukaze Machiavelli kusho
Sine-LightSpark (Njengoba ngibuka kuphela amavidiyo we-YouTube ngeFirefox 5) ingidla imemori engaphansi kakhulu kwe-10 MB, ngenkathi iFlashPlayer ingidla okungenani i-70 MB kanye nobukhulu obungaba ngu-384 MB wememori
Phendula u-Inukaze Machiavelli